Ilhan Cumar oo lagu heysto 'maxaad Turkiga ugu hiilisay?' - BBC News Somali
Ilhan Cumar oo lagu heysto 'maxaad Turkiga ugu hiilisay?'
1 Nofembar 2019
Xigashada Sawirka, Ilhan Cumar
Xildhibaan Ilhaan Cumar ayaa diiday in ay u codeyso oo ay taageerto qaraar la doonayay in dil ka dhacay Armenia oo ay ka dambeeyeen embaraadooriyaddii Cusmaaniyiinta, loogu aqoonsado in uu ahaa xasuuq.
Ilhaan ayaa sheegtay in haddii tallaabadaas la qaadayana lagu soo daro xasuuqyadii taariikhiga ahaa ee horay u dhacay.
Ilhaan Cumar oo ka tirsan xisbiga Dimuqraadiga, lagana soo doorto Minnesota, ayaa ka mid ahayd saddex xildhibaan oo diiday in ay arrintaas taageeraan.
Qaraarkan ayaa meel maray, waxaana taageeray 405 xildhibaan, halka 12 kalena ay ka aamuseen.
Ilhaan oo markii ay codbixinta qaraarkaas dhamaatay hadashay ayaa sheegtay in ay aaminsan tahay isla xisaabtanka ku aadan tacaddiyada ka dhanka ah xuquuqda aadanah, balse isla xisaabtanka iyo in dhacdo loo aqoonsado xasuuqa in aysan nooqnin ul siyaasadeed lagu dagaalamo.
"Waa in qiimeynta lagu saleeyaa qaab cilmiyadeysan, kana baxsan hardanka siyaasadeed ee gobolka", ayay tiri Ilhaan.
Ilhaan ayaa u muuqatay in arrintan ay la xiriirneyso xiisadda isa soo tareysa ee duullaanka Turkiga uu ka wado wadanka Suuriya, ka dib markii ciidamada Mareykanka ay isaga baxeen waqooyiga dalkaas.
"In si dhab ah loo aqoonsado dembiyadii taariikhiga ahaa ee ka dhanka ahaa xuquuqda aadanaha, oo ay ka mid yihiin xasuuqii dhacay qarnigii 20-aad ee loo geystay dadkii madowga ahaa iyo kuwii asal ahaan ka soo jeeday Ameerika ee la xasuuqay, kuwaas oo gaarayay boqolaal malyan oo qof", ayay Ilhaan u sheegtay telefishenka CNN.
Ilhan Cumar: Xiriirkeyga guur wuxuu u burburay si aan ka soo kabasho la hayn
Maraykanka: Dagaalka Ilhaan iyo Trump oo waji horleh yeeshay
Ilhaan Cumar oo taageertay dadka isku jinsiga ah ee isu galmooda
Dhamaan 11 xildhibaan ee ka soo horjeestay qaraarkan ayaa ah kuwa ka tirsan xisbiga Jamhuuriga ee Mdaxaweyne Donald Trump, waxaana ku wehliya xildhibaan Ilhaan oo ka mid ah xisbiga Dimuquraadiga.
"Ma waxaa jira sax iyo khalad, u istaag cadaaladda aad sheegeyso in aad u ololeyso", waxaa sidaa sheegay Tadeos Barseghyan oo ah baadari ka tirsan kaniisadda St. Sahag Armenian ee dalka Mareykanka.
Dad badan oo adeegsadaa baraha bulshada ee dalka Mareykanka ayaa aad u dhaliilay Ilhaan Cumar, iyagoona sheegay in ay taageertay wax ay ugu yereen "cadaladd darro indhaha laga qabsaday"
Hogaanka xisbiga Dimuqraadiga ayaa markii la meel mariyay qaraarka u dabaaldegay, waxaana dadkii guushaas ku farxay ka mid ahaa gudoomiyaha guddiga sirdoonka Mareykanka, Adam Schiff, oo bartiisa Twitter ku qoray: "Aqalka Kongreska wuxuu u codeeyay in uu aqoonsado xasuuqii Armenia, si guushaas ay u hirgashan waxaan usoo halgamayay 19 sano, arrintaas oo tobannaan sano ay sugayeen shacabka Armenia."
Waxaa kale oo uu sheegay in aysna qeyb ka noqon doonin in la dafiro xasuuqa, oo uu ula jeeday in aysan ka aamusi doonin, hilmaami dooninna.
Afhayeenka aqalka Kongreska, Nancy Pelosi ayaa war qoraal ah oo ay soo saartay ku sheegtay in qaraarkaas lagag dhiidhiyay mid ka mid ah xasuuqii ugu ba'naa ee qarnigii 20aad.
Hasayeeshee dowladda Turkiga ayaa ku gacan seyrtay qaraarkaas, waxaana dadkii ka hadlay ka mid ahaa Madaxweynaha Turkiga, Recep Tayyip Erdogan, oo sheegay in aysan aqoonsaneyn arrinkaas, oo aysan jirin wax micno ah oo uu qaraarkaas ku fadhiyo.
Waxaa kale oo uu Madxaweynaha sheegay in barlamaanka dalkiisa uu ka jawaabi doona qaraarkaas ay taagereen xildhibanaada aqalka Kongreska.
10 qof oo hal qoys ka tirsanaa oo ku dhintay duqeymaha sii xoogeystay ee Israa'iil
TOOS Sucuudiga oo ka hadlay duqeymaha Israa'iil ee Qaza
Afafka lumay: 'Waan awoodi waayey ayeydey inaan la hadlo'
Xaaskii Bill Gates oo arrin la yaab leh samaysay furiinkoodii kaddib
Al Jazeera oo war ka soo saartay duqayntii loo gaystay xarunteeda Gaza
Maxaad ka taqaanaa Xamaasta dagaalka culus kula jirta Israa'iil?